AMBALAVAO : Najoro ny vovonana afaka mampiroborobo ny toekarena
Ny distrikan’Ambalavao dia anisany manana ireo singa maro afaka mampivelatra ny lafiny toekarena. 28 novembre 2017
Zava-poana ihany anefa izany raha tsy misy ny drafitra sy ny paikady mazava hahafahana manodina ireo singa sy zavatra ananana ho lasa tombontsoan’ny distrika. Noho izany àry dia nisy lamina sy drafitra napetrak’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny any amin’iny faritra iny mba hahafahana manome lanja izay toekarena izay. Fantatra mantsy izao fa tafatsangana, ny faran’ny herinandro lasa teo, tao Ambalavao tampon-tanàna, ny vovonam-pikambanam-pampandrosoana ara-toekarena izay nomena ny anarana hoe « Tovosoa ».
Efa manao ireo asa sy hetsika sahaniny amin’izao fotoana izao izany vovonana najoro izany. Tsara ho fantatra fa ny avy ao amin’ny « Centre d’Information Technique et Economique » (Cite) ao Ambalavao no nitarika ny atrikasa ho fananganana izany sehatra izany. Ny Cite dia ivon-toerana fahazoana vaovao ara-teknika sy ara-toekarena, hita ao amin’ny distrikan’Ambalavao. Voasolotena ao anatin’izany vovonana izany avokoa araka izany ireo eo anivon’ny fitondram-panjakana any an-toerana, ireo sampan-draharaha sy ireo firaisa-monim-pirenena, ny tetikasa sy fandaharan’asa samihafa ary ireo sehatra tsy miankina ihany koa. Araka ny fanazavana dia tetikasa izay tohanan’ny “Organisation international de la Francophonie” (Oif) no anisany harafitra sy hotanterahina ao anatin’izany sehatra hifanakalozana ara-toekarena izany.
Hojerena manokana araka izany izay azo atao hampiroboroboana ny seha-pihariana misy ao Ambalavao mba ho fampandrosoana, na izany ny asa an-tanana na ny fambolena sy ny fiompiana. Najoro ny birao izay havaozina isan-telo taona ary efa voadinika miaraka ny sata fototra hijoroan’ny vovonana. Anisan’ireo hanetsiketsika izany vovonana izany ny Cite, raha ny voalaza hatrany. Hanana teknisianina mpanatanteraka ihany koa ireo vovonana ireo sy ireo mpahazo tombontsoa ao aminy.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (1921) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (908) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (204) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (109) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (92) 2 mars 2021